6 Arimood Oo Waajib Kugu Ah Inaad Sameyso Haddii Aad Qof Si Dhab Ah U Jeceshahay - Aayaha
Aayaha editorJune 28, 2020
Waxaan idiin soo gudbineynaa 6 waxyaabood oo waajib kugu ah inaad sameysid haddii aad qof si dhab ah u jeceshahay.
Waa inaad xushmeysaa
Ma jeclid qof aadan xushmeyn, xaqiiqda ayaana sidaas ah. Xushmad la’aanta waa sababta ugu weyn ee jacaylka u burburo. Haddii aad dhab u jeceshahay lamaanahaaga waa inaad xushmad u muujisaa.
Waa inaad la xiriirtaa
iaxiriirinta waa tiir kale uu leeyahay xiriirka lamaanaha, xirii la’aan waa burburayaa jacaylka iyo xiriirka lamaanaha, waa inaad la xirirtaa lamaantaada, midba kan kale ka dhageysto oo dareen ha siiyo baahidiisa.
Waa inay kaa go’naataa
Way adagtahay in la sharxo xiriir laamaanaha leh aysan dhexda isku xiran iyagoo hadana sheeganaya inay isjecelyihiin, haddii aad dhab u jeceshahay lamaankaaga/lamaantaada, waa inaad diyaar u noqotaa inaad wax walba ku bixiso inuu xiriirkaas uu guuleysto.
Waa in aadan naftaada kaliya ka fekerin
In naftaada bis aadka fekerto waa dabeecad kale oo loo baahanyahay inaad iska tuurto marka aad qof jacayl u qaadid.
Marka aadan naftaada kaliya ka fekerin waxaad noqoneysaa mid sidoo kale ka fekera lamaantiisa/lamaankiisa.
Waa in jacaylkaas aad muujisaa maalin kasta
Jacaylka jacayl maahan illaa laga muujiyaa oo lasoo bandhigaa, jacaylka waa eray ficil leh qofna si dhab ah uma jeclaan kartid adigoo aanan muujin marka haddii aad dhab u jeceshahay qof waa inaad muujisaa jacaylkaas maalin walbo.
Qadarin la’aanta waa shay kale oo burburiya xiriirka lamaanaha muddooyinkaan, waa qalad weyn marka aad gabtid qadarinta waxay lamaantaada kuu sameyso amaba aadan nafteeda qadarin.
Waa inay kaa go’naataa inaad ku qadarisid wax kasta oo ay kuu sameyso lamaaantaada/lamaankaaga.
Haddii aad qof si dhab ah u jeceshahay waa inaad diyaar u noqotaa inaad sameyso waxyaabahan.
#Xiriirka Iyo Guurka Jaceyl dhab ah Xiriirka